watchOS 3.2.3 beta 4 uye tvOS 11 kudzokorora zvakare mumaoko evanogadzira | IPhone nhau
Nhasi masikati taona iyo iOS 11 beta 2 kugadzirisa 1 kuburitswa kune zvimwe zvigadzirwa uye nayo yechina beta vhezheni yeWOSOS 3.2.3 uye kudzoreredzwa kudiki kweTVOS 11 yasvikawo.
Mune ino kesi, shanduro dzakaburitswa dzinoenderana zvakananga neshanduro pamberi peveruzhinji beta, asi isu tinoshamisika kuti mune iyi nyaya isu hatinawo kugadziridzwa kudiki muMacOS, chimwe chinhu chinogona kusvika mangwana. Chero zvazvingava tine nyowani beta 4 yewatchOS 3.2.3 ine chitupa nhamba 14V5751a uye iyo tvOS kudzokorora 11.
Kana iwe uri mugadziri rangarira kuti iwe unofanirwa kutanga waisa iyo iOS 11 beta 2 vhezheni uyezve unogona kuisa iyi beta vhezheni paApple Watch. Shanduro dzewadhi yakangwara hadzibvumidze kurodha pasi, saka chenjera paunenge uchiisa izvi zvisingabvumidze kudzokera kumashure kana zvikatadza uye zvinogona kukonzera dambudziko kune rimwe chete. Zvinoita sekudaro kunatsiridzwa mushanduro idzi tarisa pazvigadziriso zvebug uye kugadzirisa kwe bug inowanikwa mune yapfuura beta vhezheni. Kuisa beta paApple Watch isu tinofanirwa kuve nechidimbu chine inopfuura 50% bhatiri uye kuiswa panzvimbo yekuchaja, tinofanirwa kushandisa iyo iPhone Watch application uye kugadzirisa.
Zviripachena kuti isu hatigone kuwana kuwanda kwakanyanya mavari sezvo ari edzidzo yeshanduro dzapfuura, asi kana paine chero yakanakisa nhau isu tichagovana newe mune ino imwe chete chinyorwa. Parizvino tichiri kufanira kuona beta ye macOS uye kuvhurwa kweshanduro dzeveruzhinji, idzo dzakarongerwa svondo rino kana Apple isingavanononokeresa nechimwe chikonzero, kubvira vakanyevera kuti vachatangwa muna Chikumi uye iri vhiki rekupedzisira remwedzi saka tava pedyo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » watchOS 3.2.3 beta 4 uye tvOS 11 kudzokorora zvakare mumaoko evanogadzira